Ithegi: indawo ye-alienware 51 | Martech Zone
Ithegi: indawo ye-Alien 51
Yintoni iNyaniso eyiyo?
NgoMgqibelo, ngoMeyi 19, 2018 NgoLwesihlanu, Meyi 18, 2018 Douglas Karr
Ukukhawuleziswa kwetekhnoloji kukuthatha umoya. Ukuba ubuza kundibuza uluvo lwam malunga nenyani ebonakalayo kunyaka ophelileyo, ngekhe ndikuxelele ukuba inethuba elilinganiselweyo kwezemfundo nakwezolonwabo. Nangona kunjalo, njengoko benditshilo kwiposti yamva nje emva kokuya kwiDell Technology World, ukubona utshintsho lwedijithali olwenzekayo kwihlabathi litshintsha umbono wam ngayo yonke into. Yintoni iNyaniso eyiyo? Eyona nyani (VR) yiyo